छिटो पाक - को माइक्रोवेव मा केक
भान्सा माइक्रोवेव उपस्थिति ओवन आज कुनै आश्चर्य। तर केही कारणले घर उपकरण को संभावनाहरु को धेरै सीमित प्रयोग धेरै, माइक्रोवेव तयार बनाएको व्यञ्जन को ताप लागि ओवन विशेष employing। यसैबीच, एक माइक्रोवेव ओवन खाना धेरै फरक पकाउन गर्न सक्छन्, यो सुविधाजनक सलाद, रोस्ट मासु वा माछा र पनि पकाना केक र बिस्कुट लागि तरकारी तयार छ।
र सुखा एक माइक्रोवेव ओवन मा भएको माइक्रोवेव मा केक, तपाईं सजिलै नास्ता वा अचानक अप्रत्याशित अतिथि देख्यो भने Bake सकून्, तीन पाँच मिनेट मा तयार छ। पाक लागि, तपाईं उपयुक्त कुनै पनि बर्तन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोवेव ओवन लागि। र तपाईं एउटा सानो केक Bake गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सबैभन्दा सामान्य माटोको मग वा piala मा यो गर्न सक्नुहुन्छ।
एक माइक्रोवेव ओवन मा पकाना मा उपस्थित जो केवल drawback, यो फिक्का र उपस्थिति धेरै आकर्षक छैन उत्तेजित गर्दछ, कि छ, केक पनि हल्का छ भन्ने छ। तर यो परिस्थितिमा सजिलो हटाउन, बस उनलाई छ कि कोको पाउडर को आटा, लागि, माइक्रोवेव मा एक चकलेट muffin तयार थप्नुहोस्। अर्को विकल्प - glazes को प्रयोग, जो पकाएको पेस्ट्री कवर गर्न सक्नुहुन्छ।
पकाना जब तपाईं विचार गर्नुपर्छ कि अर्को सुविधा एक माइक्रोवेव ओवन मा आटा सामान्य भन्दा बढी तरल हुनुपर्छ भन्ने छ। तपाईं आफ्नो लिन निर्णय भने कि, छ नुस्खा केक वा बिस्कुट, तपाईं ओवन मा Bake जो, त्यसपछि अलिकति सानना पीठो को मात्रा कम वा, त्यसको विपरीत थपियो तरल को मात्रा बढ्छ। को माइक्रोवेव मा केक, बाक्लो आटा बनेको भन्ने तथ्यलाई पनि ड्राई बाहिर जान्छ।
एक माइक्रोवेव ओवन पाक बन्न सक्छ मा सूक्खापना र भन्ने तथ्यलाई कारण बस केक , overdone को पाक समय अर्थात् पनि उच्च थियो। यसबाहेक, यो गोल आकार लिन सबै भन्दा राम्रो छ त्यसैले आयताकार आकारहरू पाक उत्पादनहरु मा अक्सर ड्राई किनारा, प्रयोग गर्दा, तर आदर्श घन्टी गठन गर्ने छ। खैर, तपाईं यस्तो सामूहिक मात्रा छैन भने, यो सबै भन्दा साधारण व्यञ्जन देखि गर्न धेरै सजिलो छ। यो माइक्रोवेव गर्न सामान्य ग्लास पट लिन पर्याप्त छ र आधा पानी भरिएको गिलास को केन्द्र मा राखे।
त्यसैले, एक माइक्रोवेव ओवन मा केक पकाउन सुरु। Vzobem, एक मिक्सर र चीनी को आधा कप दुई अन्डा कोको पाउडर दुई चमचा र नुन एक चिम्टी पिटाई को अन्त मा थप्दा। मक्खन को सय ग्राम ढल्छ (तपाईं माइक्रोवेव मा शाब्दिक तीस सेकेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ), र कुटपिट गर्न थप गर्नुहोस्। फेरि एक राम्रो whisk ठूलो। अब, बेकिंग पाउडर को एक चम्मच र वेनिला चीनी को एक प्याकेट संग आटा को आधा कप मिश्रण। दुवै मिश्रण पीठो तरल मा बिस्तारै राख्दै vsyp र मिक्सर whipping।
एक गिलास राउन्ड पैन लिन हल्कासित भित्रबाट तेल यसलाई तेल, र केन्द्रमा आधा पानी भरिएको ग्लास राखे। तयार पैन कुटपिट मा पोख्नुहोस्। पाँच मिनेट 900 वाट को एक शक्ति मा Bake। बीप पछि पाँच सात अर्को मिनेट लागि घडी वा दिने यो "पकाना", ओवन देखि केक हटाउन। तयार केक ग्लेज ढाकिएको गर्न सकिन्छ।
हामी माइक्रोवेव मा एक चकलेट muffin थियो। माथिको दिइएको हुन सक्छ केहि "स्तरवृद्धि" र पागल को उत्पादन, खुशामदभरा फल, किसमिस वा खुशबूदार Essences समावेश नुस्खा। तपाईं कोका चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो आटा गर्न, पीठो को राशि वृद्धि थप्न छैन। तर तपाईं फिक्का हेर्न थिएन हाम्रो केक गर्न उत्पादन Icing को शीर्ष र पक्ष ढाक्न निश्चित हुन आवश्यक छ।
र यहाँ कसरी तपाईं चिया सामान्य कप को फारम उपयोग, माइक्रोवेव मा पाक्नु cupcakes व्यक्त गर्न सकिन्छ। हामी पीठो र चीनी को चार चमचा, कोका, अन्डा को दुई चमचा, दूध र तरकारी तेल तीन चम्मच आवश्यक छ। एक चम्मच सोडा (भुक्तानी गर्न बन्द), खट्टे क्रीम र केही grated चकलेट दुई चमचा को तेस्रो। स्वाद आटा गर्न, तपाईं वेनिला चीनी (पिन्च) थप्न सक्नुहुन्छ।
सबै उत्पादनहरु (क्रीम र चकलेट बाहेक) मिश्रण र एक कप (मात्रा 350-400 एमएल) मा परिणामस्वरूप आटा खन्याउन। एक शक्ति 900 वाट्स3र आधा मिनेट मा पाक्नु केक र उसलाई पाँच मिनेट "पकाना" दिन। को मग देखि समाप्त केक हटाउँदै, खट्टे क्रीम संग शीर्ष चिल्लो र grated चकलेट संग छिडकना। यो केक पनि काम वा नास्ता लागि बिहान तयार गर्न सकिन्छ।
आहार र छुट्टी लागि परिवार खाने लागि हट पोर्क व्यञ्जन,
कि चिकन भुईँकटर संग संयुक्त छ? संयोजन स्वादिष्ट र उपयोगी
काउसकस। एउटा सरल तर स्वादिष्ट पकवान लागि नुस्खा
हामी घरेलु पनिर र सूजी संग अल्छी पकौडी के
चिकन खुट्टा। सरल र स्वादिष्ट
ब्रेज्ड बन्दागोभी multivarka लागि सजिलो नुस्खा
रोमाञ्चक - सिनेमा को एक विधा: परिभाषा, फिलिम को सूची
आज Korkinsky कटौती
घर मा चीजकेकी नुस्खा
नींबू संग पानी एक अद्भुत सरल र उपयोगी पेय हो
Prolactin: महिला यो हर्मोन को दर - स्वास्थ्य गर्न प्रमुख
एउटा बन्द भंग के हो? विस्थापन बन्द भंग। भंग लागि पहिलो सहायता
अभिनेता "नम्बर एक लक्ष्य": वर्गीकृत सामाग्री पहुँच
उपचारात्मक माटोको ताल Tambukansky
Cryodestruction papillomas: प्रक्रिया को वर्णन, सङ्केत गर्छ, रोगी समीक्षा